United ayaa la rajeynayaa inay soo bandhigto fursado la mid ah Juan Mata, Luke Shaw, Ashley Young iyo Daley Blind, inkastoo Marouane Fellaini uu u muuqdo inuu ka tagayo si xor ah xagaagan. | Ciyaarside.com
United ayaa la rajeynayaa inay soo bandhigto fursado la mid ah Juan Mata, Luke Shaw, Ashley Young iyo Daley Blind, inkastoo Marouane Fellaini uu u muuqdo inuu ka tagayo si xor ah xagaagan.
Manchester United ayaa dooneysa inay qandaraaska u kordhiso Ander Herrera.
Heshiiska caalamiga ah ee Spain ayaa la filayaa inuu dhamaado xagaaga soo aadan, lakiin haatan wuxuu ku biiray Old Trafford ilaa 2019.
Atletico Madrid ayaa soo bandhigtay xiisaha ay u qabto 28 jirkaan, laakiin Herrera ayaa ku faraxsan in Manchester uu doonayo inuu sii wado shaqada tababaraha Jose Mourinho.
Wakiilada Herrera ayaa wadahadalo kula yeeshay United heshiis qandaraas dheer ah, lakiin waxa ay haatan heystaan qiimaha ay ku iibinayaan sanadka soo socda, kooxda ayaa difaaceysa hantidooda ilaa ay wadahadaladu bilaabanayaan.
Ciyaaryahankii hore ee Athletic Bilbao khadka dhexe ayaa muhim u ah Mourinho, inkastoo imaanshiyaha Nemanja Matic iyo soo laabashada Paul Pogba ay xakameynayaan kooxdiisii ugu horeysay xilli ciyaareedkan.
Waxa uu ku guuleystay abaalmarinta xiddiga sannadka ee Manchester United Sir Matt Busby ee sannadka May, waxaana loo doortay nin ka mid ah ciyaartii finalka Europa League ee Ajax.